Booliska kenya oo faah faahin ka bixiyay weerar Al-Shabaab ay ka fuliyeen Mandheere – Banaadir weyne
Nairobi – Ciidamada Booliska Dalka Kenya ayaa waxaa ay faahfaahin ka bixiyeen Weerar ay Al-Shabaab ka fuliyeeen Magalada Mandheere ee gobolka Waqooyi bari ee Dalka Kenya.
Afhayeen u hadlay booliska Kenya ayaa waxaa uu sheegay in Al-Shabaab ay beegsadeen gaari bas ah oo ay saarnaayeen dad shacab ah, islamarkaana uu ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Sidoo kale Booliska ayaa waxay tilmaameen in gaariga la weeraray uu ka ambabaxay magaalada Madheere, islamarkaana uu ku sii jeeday Magaalada Nairobi ee dalka kenya.
Warka ka soo baxay booliska ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in weerarka ay qaadeen lix dagaalame oo ka tirsan Al-Shabaab, islamarkaana ragga weerarka fuliyay ay goobta ka baxsadeeen sida ay hadalka u dhigeen.
Dhawaan ayay aheyd markii Al-Shabaab ay weerar la beegsadeen macalimiinta wax ka dhigi jiray gobolka Waqooyi bari ee dalka kenya, kuwaasi oo markii dambe cabsi ay ka qabaan in ay sii kordhaan weerarada Al-Shabaab ay ka carareen gobolkaasi.
Dabayaaqadii sannadkii 2011-kii ayey Al Shabaab sare u qaadday dhaqdhaqaaqyada ay ka sameyso Kenya, ka dib markii Milatariga Kenya ay bishii Oktoobar ee isla sannadkaas gudaha u soo galeen Soomaaliya, xilligaasoo xukuumadda Nairobi ay sheegtay iney ugu tallowday Soomaaliya, si ay ula dagaallanto Al Shabab.
Xilligaasi wixii ka dambeeyay Al Shabaab ayay u surogashay iney dhowr weerar ka fuliyaan gudaha dallka Kenya kuwaasi oo qaarkood geystay khasaaro badan. – Somali Weyn News